Cuberdon waa mid ka mid ah macmacaanka ugu fiican oo ugu dahsoon maxaliga ah ee Europe. Waa hat-qaabeeya, badanaa buluug, waxaana ka buuxsamay buuxinta miiska. Marka idin qaniini mid, ilkaha galeen dhexe jilicsan buuxinta fudayd. Waxay badanaa ugu yeeraan Belgium’s sirta ugu fiican. Sababtoo ah waa adag tahay in la badbaadin dhowr toddobaad ka dib, ma dhoofiyaan badiyaa. Si kastaba ha ahaatee, waayo dalxiis oo doonaya in ay isku dayaan wax gaar ah oo guriga u keenaan, cuberdon waa kaamil.